Posted on 10 / 12 / 2019 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
Lokhu kuzoba ukubuka konke okujwayelekile kakhulu ngezinjongo zolwazi olujwayelekile kuphela, akuyona inkomba yokuthi ungasiqondisa kanjani. Lokhu akusho ukuthi ngivumela ukusetshenziswa kwayo noma ukuvuma ukusetshenziswa.
Imvamisa kungaqondwa kahle noma kuhlukaniswe ngendlela engeyiyo- kunezinhlobo ezahlukene zama-steroid. Ama-Corticosteroids, anemiphumela emibi emibi kune I-Anabolic Steroids, ngasizathu simbe asikhonjiswa imidiya futhi ukusetshenziswa kwayo empeleni KUKUFINYELEKILE ezimweni eziningi- kufaka phakathi ezemidlalo nezobuchwepheshe. Zivame ukusetshenziselwa ukulwa nokuvuvukala. Kukhona neProgesterone esetshenziswa ezinhlotsheni eziningi zokulawulwa kokuzalwa futhi ithathwe yizigidi zabesifazane nsuku zonke. Ama-anabolic steroid (lapha abizwa ngokuthi yi-AS noma AS) yilokho abantu abaningi abacabanga ngakho lapho beqala ukuzwa “ama-steroid” nazo zonke izinto ezimbi ezihambisana nabo.
A) I-testicular Atrophy- lapho ufaka amanani amaningi we Testosterone i-HPTA yomzimba wakho iqala ukuvala umlomo (iyeka ukukhiqiza iTestosterone ngoba umzimba wakho usuqala ngokwedlula okwanele); Ngamafuphi lokhu kubangela ukuthi amabhola akho anciphe. Esikhathini esiningi azibonakali. Mhlawumbe ukunciphisa kwe-25%, i-50% kakhulu. Lapho usuhamba umjikelezo, gijima i-PCT yakho (Ukwelashwa ngomjikelezo) babuyela kusayizi ogcwele. Akukhona okungapheli. Abanye abantu bane-HCG (i-Human chorionic-gonadatropin) ngenkathi bejikeleza ukugcina amabhola abo ngosayizi ogcwele futhi iyasiza ekululameni ngoba igcina amaseli akho e-leydig esebenza.
B) Ukuncipha / ukuncipha kwezinwele: I-AS ayibangeli uludwebu noma ukuncipha kwezinwele. Kodwa-ke, ingasheshisa inqubo. Uma ukulahleka kwezinwele kugijima emndenini wakho, ungamangala ukuthi uzoba yilowo ozothatha izintambo zokusheshisa le nqubo. UBill Roberts wabhala ngezinhlobo ezimbili ezahlukahlukene zamaSteroids- Uhlobo I no Type II; Thayipha amakhompiyutha amakhulu njenge-Testosterone, iTren, i-Decca, iSust, njll bese uthayipha uhlobo II lolo I-Winstrol (stanazolol), i-dbol, i-anavar, i-Masteron njll Iningi labantu lisola izidakamizwa ezifana ne-Winstrol ne Masteron Enanthate (Drostanolone) njengembangela yokulahleka kwezinwele futhi uzame ukugwema leyo mishanguzo uma ukhathazekile nge-MPB, lapho lokho kungenjalo empeleni uhlobo lomthelela onamandla amakhulu okushiwo yi-MPB (ulusu lwephethini lowesilisa) kunanoma yiziphi ezinye izinhlobo zemithi. Futhi kusobala ukuthi izidakamizwa ezisuselwa ku-DHT (njenge-deca) zizoba zimbi esikhumbeni sakho. Ukuphela kwendlela yokulwa nalokhu ukuthatha i-Finasteride (propecia / proscar) ezinye izinhlobo zama-rogaine zohlobo oluthile lwama-shampoos nezinye izinto ezimbalwa.
C) Izinduna- abanye abantu baqubuka ebusweni babo; abanye abantu baphuka esifubeni noma emhlane wabo ... kanti isikhumba sabanye abantu siyabonakala. Futhi, wonke umuntu uthinteka ngendlela ehlukile.
D) Ngizizwa sengathi lokhu kufanele ngabe kumbozwe ngaphansi kwe-testicular atrophy futhi ngivele ngikhohlwe. Izikhathi eziningi ngizwa abantu bekhuluma nge-AS okwenza i-dick yakho igcwale, lapho empeleni besho amabhola akho. Ngakho-ke, ukucacisa, i-dick yakho ayinciphisi futhi lokho kwenza ngengqondo enkulu njengokuthi ukuthatha i-pua yensimbi kunciphisa ikhala lakho. Uma kukhona, ngegazi eliningi eligeleza kuleyo ndawo ngingasho ukuthi uzothambekela kakhulu ekwenzekeni okuphambene. Nakulokhu kuncike kumakhompiyutha owaphuza- ezinye izidakamizwa ezifana ne-Deca neTren zingaba nokhahlo kakhulu kwi-libido yakho (yingakho ibinzana, "deca-dick") futhi abanye abafana bakhethe ukuthatha I-Tadalafil (Cialis) (I-171596-29-5) noma i-viagra (akudingeki ukuthi) kepha ezinye izidakamizwa ezifana no-Test up (noma yiluphi uhlobo) noma i-dbol zizobe zikhuphuka ezindongeni futhi zihma nje …………… .. Amantombazane amaningi anendoda noma isoka emjikelezweni kubukeka sengathi bayayijabulela indoda yabo ekubeni kumjikelezo, lol.
E) "Roid-ukufutheka" - Ayikho into enjalo. Kulula kanjalo. Uma ungumuntu ongazinzile, yebo, bazokukwenza ube ongazinzanga kakhulu. Kepha-ke futhi, ezinye izinto eziningi kanye nemithi kungenzeka ibangele lokho. Uma unengqondo engazinzile noma utholakala ukuthi unenkinga yengqondo akumele ucabangele ukuthatha ama-steroid. Ngifisa ukuthi kungashiwo okufanayo nangotshwala. Iningi labantu alithinteki kulokhu. Iningi labantu lizizwa sengathi lisesimweni esingcono noma alikho elehlukile. Ngibona abantu mhlawumbe bethola i-cockier ngoba bakhulu futhi banamandla amancane, kepha ngaphandle kwalokho, noma yini ebika "i-roid-angry" (isikhungo sikahulumeni noma cha) yi-horseshit.
Ama-Steroid awenzi ukuthi abantu bafe noma baholele ekufeni kwabo ngenxa yokusabela okuthile okubi. Akuzange kube khona izifundo zesayensi ezibonisa ukuxhumana okuqondile kuma-anabolic steroid nokufa. Abantu bazokhomba i-Zyzz, kepha ngeke bakhombe emlandweni womndeni wakhe wesifo senhliziyo / izimo futhi angicabangi ukuthi i-autopsy yake yenziwa esidlangalaleni? Ukucaphuna izibalo ze-CDC kusuka ku-2005 kusuka ku-Bigger Stronger Faster:
kanye nokufa kusuka kuma-anabolic steroid ……: 3
Yebo, uma ama-steroid enziwa ngendlela engalungile angaba yingozi. Ama-steroid omlomo (anjenge-dbol, i-winstrol, i-anavar, njll.) Angama-hepatoxic futhi angaba nesihluku esikhulu esibindini sakho uma ephuzwa ngemithamo ephezulu kakhulu futhi isikhathi eside kakhulu… futhi uma ephuza utshwala ngenkathi umjikelezo. Kungakho kunconywa ukuthi kwenziwe amaphaneli wegazi ngaphambi, phakathi, nangemuva komjikelezo. Ukuthatha izinto ezifana nobisi thistle kungasiza ukunciphisa umthwalo esibindini sakho.
Ingcindezi yegazi ingakhuphuka futhi, futhi izokhuphuka, futhi ngokuya ngokuya ngamakhompiyutha owathathayo (ikakhulukazi I-Methandrostenolone (Dianabol) powder kanye ne-EQ). Ukuthatha irayisi elibomvu kungasisiza ukuthi i-cholesterol ne-BP ihlolwe. Impela yinto edinga ukubhekwa. Futhi kusona sizathu sokuthi kungani kufanele udle UKUKHANYA ngenkathi ukujikeleza- ungadli pizza, ama-burger nama-fries.
Ama-Steroid athatha i-intramuscularly- hhayi intravenly. Akukho okugoqa ibhendi engalweni yakho noma yini. Ukube ubungajova emthanjeni noma emsipheni ungaphela kungenzeka. Kunamasayithi womjovo othize- okuphephe kunazo zonke ngamabhande, ama-quads, glutes, kanye nesiza se-ventro-gluteal. Abantu bavame ukucabanga ukuthi imbongolo / glutes indawo ephephe kunazo zonke, bengingavuma ngoba kunzima ukuyifinyelela futhi ngoba i-nerve yesayensi isebenza kakhulu kuleyo ndawo futhi uma ushaya lokho, inhlanhla nayo yonke impilo yakho.
Ama-Steroid ayisi izidakamizwa esiyisimangaliso. Ungahlala embhedeni udle ama-potato chips futhi mhlawumbe ukhula ube mkhulu, kepha uma lokho uzokwenza uma uzithatha, akufanele ngisho nokuthi uchithe imali yakho. Kusafanele wenze umsebenzi. Ngisadinga ukuhlanza- ngingasho ngisho nokuhlanzeka. Kusamele ngibheke konke.
Ama-Pro-hormone akuzona izindlela eziphephile zokusebenzisa ama-steroid ngoba ungazithenga kwa-GNC / Complete Nutrition / kuphi. Ziyingozi kakhulu futhi kaningi awukwazi ukuthenga imishanguzo yangempela ye-PCT lapho bese uthola umgwaqo onzima impela wokuthola usizo uma ululama ngokuphelele. Izingane eziningi kangaka zigcine ku-TRT impilo yazo yonke ngenxa yalokhu. Angiqondi ukuthi bekungakaze kube namuphi umehluko ngemuva kokumangalelwa kwalezi zitolo.
Ingabe i-MK-677 (Ibutamoren) isebenza kahle Kwakha Imisipha? Isibuyekezo Sarm [2019 NEW]	Umhlahlandlela Ophelele Wokuthenga I-2019 Yokwakhiwa kweSARM SR9009